Sidii aan ugu soo Qoray Twitter-ka oo leh Neef ... | Martech Zone
Khamiis, Janaayo 24, 2008 Axad, Sebtembar 30, 2012 Douglas Karr
Sida aniga Tweet on Twitter la Khubuura, Waxaan isku dayaa inaan Toosh. Qubasho la Khubuura waa sahlan tahay maxaa yeelay Khubuura ka Qaaday la yimaado Snurl.
Dunida muxuu yahay lingo cusub? Halkan waxba kama socdaan… muddo ka dib ayaan ku soo biiray Twitter. Twitter asal ahaan waa qol lagu sheekeysto oo caalami ah halkaas oo qofkasta uu la hadli karo qofna (waxaa jira astaamo gaar ah) Markaad faallo ama jawaab ku soo dhigto Twitter, waxaa loo yaqaan 'Tweet'. Jees jees ah Xaqiiqdii. Waqti lumis? Malaha. Maandooriye? Haa.
Dadka qaar waxay ugu yeeraan micro-blogging; si kastaba ha noqotee, shaqsiyan waxaan u arkaa inay ka badan tahay dood ama gole furan marka loo eego barta maaddaama ay wax badan is dhexgal ka tahay microblogger iyo dhagaystayaasha. Boggu wuxuu bixiyaa mowduuc uu blogger ku furi karo dood ku saabsan qoraal faahfaahsan oo la imanaya maamulka… Twitter uma oggolaanayo qolka maamulka, kaliya way fureysaa wadahadalka.
Wax badan oo ku saabsan Twitter
Twitter wuxuu kuu ogolaanayaa inaad 'raacdo' dadkaas aad xiiseyneyso. Waxaa jira magacyo aad u waa weyn oo ku jira warshadaha teknolojiyada oo badanaa ku dhajiya Twitter. Qaar iyaga ka mid ah ayaa runti codsada macluumaad ama siiya muuqaal qarsoodi ah oo ku saabsan qoraallada soo socda iyo wararka. Runtii waan maqlay warkaas Heath Ledger ku dhintey Twitter - ma ahan wararka ama shabakadda!
Haddii aad rabto inaad qof u jawaabto, waad isticmaali kartaa astaan ​​@ ah. @douglaskarr waxay ka dhigan tahay inaad ii jawaabayso ama aad ila hadlayso. Haddii aad rabto inaad ila hadasho si toos ah iyo si gaar ah, waad qori kartaa D Douglaskarr.
Aan sii wadno ...
Halkii aan aadi lahaa kan Bogga Twitter si aan ula socdo qof walba, waxaan adeegsadaa aalad saddexaad oo la yiraahdo Khubuura. Khubarada waxaa qoray Qaaday. Markaad rabto Twitter-ka oo aad xiriirin ka sameyso Tweet-gaaga, waad gaabin kartaa URL-ka adoo adeegsanaya Snurl, kaas oo lagu dhisay isla jeeriga.
Wali ma ila socotaa
Twitter wuxuu xaddidan yahay astaamaha 140 mid kasta oo ka mid ah qoraaladaada. Waa maxay sababta 140 xaraf? Ma hubo laakiin waxaan aaminsanahay inay xoogaa la jaanqaadayso xaddidaadda dabeecadda 160 ee laga helo farriimaha SMS (farriimaha taleefankaaga lagu soo diro). Twitter waa moobayl isku xiran… waxaad ku heli kartaa kuna heli kartaa fariimaha qoraalka ah taleefanka gacanta.
Marka waa maxay heck waa Twoosh?
Haddii aad soo dhigto qoraal ah 140 xaraf xitaa, taasi waa a Toosh, oo la mid ah dhuuqid dhawaqa kubbadda koleyga markii ay si fudud ugu dhex siibanayso dambiisha. Saaxiibbaday at Waxqabadka soo noqnoqda dhisay, maxaa lagu qeexi karaa oo kaliya, kuwa ugu aan faa iidada badneyn, aan toos ahayn, ciyaaraha aan waxba galabsan laakiin aan waxyeelada laheyn ee aan waligey ku arkay internetka, Tweet140.
Tweet140 runti waxay la socotaa mid kasta oo ka mid ah Tweets-kaaga, dhibcaha oo ay kugu sarreysaa awoodda aad u leedahay inaad celcelis ahaan ugu dhowaato 140 xaraf halkii Tweet intii suurtagal ah. Iyaguna way kugu baashaalaan oo way ku qoslaan markaad uriso.
Waan iska tagay duck xaalad ka dambeysa, oo hadda waxaan ahay a guumaysgeesaleyda. Tweet140 waxay run u tahay 140-ka xaraf, sidoo kale, fiiri bogga guriga oo fariimaha oo dhami waxay ku jiraan 140 astaamood.
Ma rumaysan karo in lay nuugay tan!
Marka… akhri mar kale: Sida aan Tweet on Twitter la Khubuura, Waxaan isku dayaa inaan Toosh. Qubasho la Khubuura waa sahlan tahay maxaa yeelay Khubuura ka Qaaday la yimaado Snurl.
Ma heshay hada?
Waxaan rajeynaynaa inaan ku arko adiga oo Twitter ku qoreya Khuurada, si dhakhso leh! Waxaan rajeynayaa inaad sameyso Twooshboard -ka Tweet140!
Tags: nasiib 500nasiibHannaIsaaq Pellerincilmi-baarista muhiimka ahistaraatijiyad qadla'aanistiraatiijiyadda suuqgeynta internetkaBarnaamijka Soo-jeedinta Iibka ee Online-kaistaraatijiyad online ahku dheji ereygaheerka-qaab-caadiga ahSoo Jeedinta Iibkamadaxda goobtasuuq-geynta suuqajoogitaanka telefishinkageyntaxeeladaha fayraska
Xaqiiqdii ma raaco dad igu filan oo Twitter ah (Waxaan ka ogaaday Heath Ledger Digg, xitaa intaas inbadan ma isticmaalo), laakiin liiska ayaa lagugu daray hada Doug!
Khubaradu waa aalad aad u fiican, waxaan guriga ku isticmaalayay Tweetr (barnaamij kale oo AIR ku shaqeeya) shaqada waxaanan bilaabayaa inaan wax uun ka dhigo ku rakibo Snitter shaqo. Waxaa jira kala duwanaansho fara badan, laakiin Tweetr wuxuu tiriyaa inta astaamo ee aad ka tagtay iyo sidoo kale inuu soo gaabiyo url (laakiin ma xasuusan karo waxaas), waxaa laga yaabaa inay uga fiicnaato ciyaartaada!
Hagaag, mahadsanid doug waxaan hada kuqoray twitter-ka anigoo wata daacadnimo snook ah, oo sida muuqata lajirta snurl, iyo haa, kani waa twoosh
"Ma rumaysan karo inaan ku nuugay tan!" - ditto
Hordhac weyn oo loogu talagalay adduunka Twitter. Waxaan u maleynayaa inaad ku garaacday ciddiyaha madaxa… waxay u egtahay waqti lumis qosol badan maalmaha badankood, laakiin waqti ka waqti waxaad heleysaa qiimo badan. Iyo haa, hubaal qabatimo.
Waad ku mahadsantahay furitaanka Tweet140! (Xitaa haddii adiga sameeyey iga tuur boodhka hoganka)
Boostada weyn Douglas. Runti wax si fiican bay u dejisaa. Qir - adigu waxaad tahay 'Twaddict'!
Jan 25, 2008 saacadu markay ahayd 3:09 PM
Waan qirayaa! Twaddict… Waan jeclahay!
Jan 25, 2008 saacadu markay ahayd 11:24 PM
Haa waa balwad, waxaan si xor ah u qirayaa inaan ahay Twaddict. Laakiin sidoo kale waa meel fiican oo laga helo macluumaad (Waxaan sidoo kale ka bartay Heath Ledger illaa Twitter, iyo sidoo kale dabkii ka dhacay Las Vegas iyo warar kale oo jaban). Waxaad sidoo kale la xiriiri kartaa dadka waaweyn ee kaqeyb qaadanaya (run ahaantii ama run ahaantii) isla howlahaas. Waxaan raacay taxanaha adduunka, Ciyaaraha NFL, iyo doorashooyinka madaxtinimada waqtiga dhabta ah iyo kuwa kale oo badan oo ku jira barta twitterka.
Laguma talin karo si heer sare ah.
Jan 31, 2008 saacadu markay ahayd 10:05 PM
Larry Clarkin wuxuu leeyahay boosteejo madadaalo leh halkaas oo uu ka sameysto ereyo laxiriira Twitter-kiisa. Waxaan moodayay inay mudan tahay in la wadaago.
Febraayo 17, 2008 saacadu markay tahay 9: 26 AM
Qosol badan sida aan u fahmay wax kasta oo aad ku tidhi xukunka koowaad. Taasi ma waxay ka dhigan tahay inaan ahay qaamuus?
Feb 17, 2008 markay ahayd 12:40 PM
Haa, waad tahay! 🙂
BTW: Waxaan ka beddelay Snater-ka oo waxaan u beddelay Labaatan, waxay umuuqataa inay aad uga xasiloontahay. Khubaradu waligood ma joojin doonaan qabowga ay igu hayaan.